ဆိုင်ကယ်အလန်းစားကြီးစီးပြီး အရှေ့တောင်အာရှနဲ့ မြန်မာပြည် အနှံ့ကို ခရီးတွေ ထွက်ချင်တယ် ဆိုတဲ့ နိုင်းနိုင်း – Cele Posts
လူတိုင်းမှာတော့ ကိုယ်စီဝါသနာ တစ်ခုရှိကြပါတယ်။ နိုင်းနိုင်း ကတော့ ဆိုင်ကယ်စီးရတာ အရမ်းကြိုက်သူ တစ်ယောက်ပါ။ ရောဂါတွေမဖြစ်ခင်က မကြာခဏဆိုသလို ခင်မင်ရ သူတွေနဲ့ အပျော်တမ်းဆိုင်ကယ်စီးပြီး ခရီးတွေလည်း ထွက်တတ်ပါသေးတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ နေရာတိုင်းနီးပါး အသွားအလာ ကန့်သတ်ထားတာမို့ ဆိုင်ကယ်ကိုလည်း အရင်လို လွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးခွင့်မရ နိုင်သေးပါဘူး။
သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆန္ဒတစ်ခု ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ တစ်ခုလုံးကို ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ ခရီးထွက်ချင်တာဖြစ်ကြောင်း ပြောပြလာခဲ့ပါသေးတယ်။ မိသားစုအပေါ် မှာလည်း တာဝန်ကျေပြီး ကိုယ်ပိုင် အနုပညာတွေကိုလည်း အကောင်းမွန်ဆုံး ပျိုးထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ မင်းသား တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ရတဲ့ သားသမီးလေးယောက်ကို အိမ်ပြန်ရောက်တိုင်း အချိန်အပြည့်အဝပေးပြီးပျော်ရွှင်အောင်ထားတတ်တဲ့ ဖခင်ပီသသူပါ။
ဆိုင်ကယ်နဲ့ခရီး ထွက်ချင်တဲ့ဆန္ဒကိုလည်း ” ဘယ်တော့များမှ ဆိုင်ကယ်နဲ့ ခရီးပြန်ထွက်ခွင့်ရနိုင် မလဲ ဖြစ်နိုင်ရင် မြန်မာပြည်အနှံ့ နှင့် အရှေ့တောင်အာရှကို ဆိုင်ကယ်နဲ့တော့ ပတ်ချင်မိတယ် ချစ်သောသူများလည်း ကျနော့်လိုပဲ ခရီးသွားချင်နေကြမှာပါ ဟုတ်တယ်ဟုတ်? ” ဆိုပြီး နိုင်းနိုင်းက ရင်ဖွင့်ပြောပြလာခဲ့ ပါတယ်။
ဆိုငျကယျအလနျးစားကွီးစီးပွီး အရှတေ့ောငျအာရှနဲ့ မွနျမာပွညျ အနှံ့ကို ခရီးတှေ ထှကျခငျြတယျ ဆိုတဲ့ နိုငျးနိုငျး
လူတိုငျးမှာတော့ ကိုယျစီဝါသနာ တဈခုရှိကွပါတယျ။ နိုငျးနိုငျး ကတော့ ဆိုငျကယျစီးရတာ အရမျးကွိုကျသူ တဈယောကျပါ။ ရောဂါတှမေဖွဈခငျက မကွာခဏဆိုသလို ခငျမငျရ သူတှနေဲ့ အပြျောတမျးဆိုငျကယျစီးပွီး ခရီးတှလေညျး ထှကျတတျပါသေးတယျ။ အခုအခြိနျမှာတော့ နရောတိုငျးနီးပါး အသှားအလာ ကနျ့သတျထားတာမို့ ဆိုငျကယျကိုလညျး အရငျလို လှတျလှတျလပျလပျစီးခှငျ့မရ နိုငျသေးပါဘူး။
သူ့ရဲ့ကိုယျပိုငျဆန်ဒတဈခု ကတော့ မွနျမာနိုငျငံနဲ့ အရှတေ့ောငျအာရှ တဈခုလုံးကို ဆိုငျကယျတဈစီးနဲ့ ခရီးထှကျခငျြတာဖွဈကွောငျး ပွောပွလာခဲ့ပါသေးတယျ။ မိသားစုအပျေါ မှာလညျး တာဝနျကပြွေီး ကိုယျပိုငျ အနုပညာတှကေိုလညျး အကောငျးမှနျဆုံး ပြိုးထောငျနိုငျခဲ့တဲ့ မငျးသား တဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။ ခဈြရတဲ့ သားသမီးလေးယောကျကို အိမျပွနျရောကျတိုငျး အခြိနျအပွညျ့အဝပေးပွီးပြျောရှငျအောငျထားတတျတဲ့ ဖခငျပီသသူပါ။
ဆိုငျကယျနဲ့ခရီး ထှကျခငျြတဲ့ဆန်ဒကိုလညျး ” ဘယျတော့မြားမှ ဆိုငျကယျနဲ့ ခရီးပွနျထှကျခှငျ့ရနိုငျ မလဲ ဖွဈနိုငျရငျ မွနျမာပွညျအနှံ့ နှငျ့ အရှတေ့ောငျအာရှကို ဆိုငျကယျနဲ့တော့ ပတျခငျြမိတယျ ခဈြသောသူမြားလညျး ကနြေျာ့လိုပဲ ခရီးသှားခငျြနကွေမှာပါ ဟုတျတယျဟုတျ? ” ဆိုပွီး နိုငျးနိုငျးက ရငျဖှငျ့ပွောပွလာခဲ့ ပါတယျ။